B2B (Email) Messenger ကိုအပြစ်မတင်ပါနှင့် Martech Zone
B2B (Email) Messenger ကိုအပြစ်မတင်ပါနှင့်
အင်္ဂါနေ့, မေလ 12, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 13, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး က၎င်းတို့အသုံးပြုနေသောဝန်ဆောင်မှုကိုအခြားအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့ပြောင်းရွှေ့သင့်သလားဟုမေးခဲ့သည် ဘာကြောင့်လဲလို့မေးပြီးသူတို့က ၁၁% ရတယ်လို့ပြောတယ် ခက်တယ် သူတို့ပို့သောအီးမေးလ်များကိုနှုန်းထား။ သူတို့ကပြတ်တောက်သွားသည်ဟုဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာအချို့သည်ကုမ္ပဏီတွင်တက်ကြွစွာလက်ခံသူများဖြစ်ကြောင်းလက်ဖြင့်အတည်ပြုသောကြောင့်စနစ်သည်ပြတ်တောက်သွားသည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင်တစ် ဦး မြင့်မားသောတုံမှုနှုန်း အချို့သောမျက်ခုံးမြှင့်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပေးပို့နိုင်သည့်အဖွဲ့နှင့်စကားပြောဆိုရန်ဖောက်သည်အားအားပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ပုံမှန်ကုမ္ပဏီမဟုတ် - B2B နယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်စာရင်းရှိအီးမေးလ်လိပ်စာများသည်သင်၏ပျမ်းမျှဂျီမေးလ်သို့မဟုတ်အခြားလက်ခံသူများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မေးလ်များကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေပါ။
ထိုအခါဤအမှု၌အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးကောင်းသောပို့ဆောင်မှုများအတွက်ထူးချွန်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပို့သူနဲ့ IP ဂုဏ်သတင်းပြproblemနာရှိနေတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်
ဤအခြေအနေသည် B2C အီးမေးပို့နိုင်မှုနှင့်ကွဲပြားသည်။ ကော်ပိုရိတ်မေးလ်ဖလှယ်မှုများသို့ spam ရောက်ရှိခြင်းကြောင့် IT ဌာနအများစုတွင်ရှိသည် SPAM ကိုငြင်းပယ်ရန်အသုံးချပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ စားသုံးသူစနစ်များသည်မကြာခဏပေးပို့သူ၏ဂုဏ်သတင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့် Junk Filter ခလုတ်၏ပမာဏပေါ် မူတည်၍ junk folder သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင်အီးမေးလ်ပြန်ကောင်းလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှိုက်ပုံးထဲရောက်သွားသည်။ စီးပွားရေးစနစ်များတွင်အမှိုက်ပုံးမရှိသောသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုကျော်တက်ခြင်း၊
B2C အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ဆဲဖြစ်သော်လည်း Junk Folder သို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ B2B အီးမေးလ်၊ သို့သော်လုံးလုံးလြားလြားပယ်ချနိုင်ပါသည်။ သူတို့ SPAM ကိုပိတ်ဆို့ရန်သူတို့အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ သူတို့ပြင်ဆင်ထားသည့်ချိန်ညှိချက်များနှင့်အတူအီးမေးလ်များကိုပေးပို့သူ၏ IP လိပ်စာနှင့်ဂုဏ်သတင်းပေါ် မူတည်၍ ငြင်းပယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအတွက်ငြင်းပယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ ပေးပို့သူမှပေးပို့သောအီးမေးလ်များ၏အရှိန်နှင့်အမြန်နှုန်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
B2C မြင်ကွင်းတွင်၊ အီးမေးလ်အားရုပ်ပိုင်းအားဖြင့်လက်ခံပြီးအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသူထံပြန်ပို့သည်။ B2B မြင်ကွင်းတွင်၊ အချို့သောစနစ်များသည်အီးမေးလ်ကိုလုံးလုံးလွင့်စင်သွားစေပြီးမှားယွင်းသောအမှားကုဒ်ကိုပေးသည် ခက်တယ်.
တစ်နည်းဆိုရသော် B2B ကုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်းသည်အီးမေးလ်လိပ်စာမတည်ရှိသေးသောခက်ခဲသည့်ကုတ်နံပါတ်ဖြင့်အီးမေးလ်ကိုငြင်းပယ်သည် (ဖြစ်နိုင်သည်) ။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တွေ့ရသောလည်ပတ်ငွေကြေးနှင့်အတူ B2B မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏ပျမ်းမျှ B2C လှုပ်ရှားမှုထက်သိသိသာသာမြင့်တက်နိုင်သည်။ ဤသီးသန့် client သည်နည်းပညာဖောက်သည်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏လက်ခံသူများသည်လုံခြုံရေးနှင့်အိုင်တီပညာရှင်များဖြစ်သည်။ မည်သည့်လုံခြုံရေးဆက်တင်ကိုမဆိုနှစ်သက်ကြသည်။
ထိုနေ့၏အဆုံးတွင်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်မုသာမသုံးပါ။ လက်ခံသူ၏မေးလ်ဆာဗာမှပြန်ပို့လိုက်သောကုဒ်ကိုသာတင်ပြသည်။ အီးမေးလ်အမြောက်အများတွင်သူတို့၏အိုင်ပီဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissuesနာများရှိကောင်းရှိနိုင်သည် (သင် 250ok ဖြင့်အလွယ်တကူကြည့်နိုင်သည်)၊ ဤကိစ္စတွင်သေးငယ်သော်သော်လည်းပစ်မှတ်ထားခံရသည့်စာရင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြtheနာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထံသို့ကျွန်ုပ်တို့၏စာ
သင်ကအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ်အမြောက်အများအီးမေးလ်ပို့သူဖြစ်ပါကသင်၏ IP ဂုဏ်သတင်းကိုစောင့်ကြည့်လိုလျှင်၊ ပေးပို့နိုင်မှုပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အမှန်တကယ်စာပုံးနေရာချထားခြင်းကိုတိုင်းတာလိုပါက၊ 250okပလက်ဖောင်း ငါတို့ကသူတို့နဲ့လက်တွဲဖော်။
Tags: b2b ခုန်နှုန်းထားများအီးမေးပို့နိုင်မှုခက်တယ်
သင့်ရဲ့အရောင်း ဦး ဆောင်နောက်ဆက်တွဲ template ကို
သင် Domain မှတ်ပုံတင်သူ (သို့) Reseller တစ်ယောက်နှင့်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
မေလ 13, 2015 မှာ 5: 13 pm တွင်
မေလ 13, 2015 မှာ 8: 20 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ Dara! ကြီးမြတ်မေးခွန်း, ငါကထည့်သွင်းခဲ့ကြသင့်ပါတယ်!
ဖောက်သည်များကိုခိုင်လုံသောအီးမေးလ်လိပ်စာများဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အီးမေးလ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်နေကြောင်း IT အဖွဲ့မှသိစေပါ။
B2B တွင် ၀ င်ငွေအမြောက်အများရှိပြီးဖြေရှင်းမရနိုင်သောခက်ခဲသောပြissuesနာများရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါ။ ပြsendingနာရှိရင်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်နေပါ။